आज २०७७ साउन १९ गते सोमबारको राशिफल – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आज २०७७ साउन १९ गते सोमबारको राशिफल
आज २०७७ साउन १९ गते सोमबारको राशिफल
आज २०७७ साउन १९ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ज्योतिषी एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । कसैसंग सामान्य विवाद पनि हुन सक्छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कमजोर नतिजा सच्याउन केही काम दोहोर्याउनुपरे पनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त हुनाले काममा उत्साह जाग्नेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुनेछ।
सोखले खर्च बढाए पनि मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन-अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ लगानी बढाउनुपरे पनि व्यवसाय थालनी हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। तर कामको सन्दर्भमा विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला ।
शिक्षकहरुमा कोराना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय !
सात महिनाको ग’र्भ बो’काएर केटो फ’रार-भिडियो हेर्नुहोस
तीन कन्याकुमारी भेट्दा निस्कियो प्रेमीको चर्चा, बोईफ़्रेण्ड बनाउने बेला होईन हाम्रो भन्दै दिए जवाफ (हेर्नुहोस भिडियो)
बाग्लुङबाट दु:खद खबर ! क’हालीलाग्दो तस्वीर मा हेर्नुहोस
आजदेखि तीन दिनसम्म पूर्णरुपमा निषेधा’ज्ञा जारी , हिँडडुल गरेको पाइएमा क’डा कार’वाही हुने